युक्रेनी बैंकको ब्याजदरमा दोब्बर वृद्धि, युरोपभरिमै उच्च दर कायम ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»युक्रेनी बैंकको ब्याजदरमा दोब्बर वृद्धि, युरोपभरिमै उच्च दर कायम !
युक्रेनी बैंकको ब्याजदरमा दोब्बर वृद्धि, युरोपभरिमै उच्च दर कायम !
युक्रेनमा बैंक ब्याजदर दोब्बरले वृद्धि भएको छ । युक्रेनको केन्द्रीय बैंक ‘नेसनल बैंक अफ युक्रेन’ले ब्याजदर दोब्बरभन्दा बढीले बढाउँदै २५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यो ब्याजदर युरोपभरिमै उच्च हो ।
रुसको आक्रमणपश्चात निरन्तर वृद्धि भइरहेको मुद्रास्फीतिलाई रोक्न र मुद्राको मूल्यमा आइरहेको गिरावट थाम्न युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको हो । युक्रेनमा युद्ध सुरु भएयता व्यवसायहरु बन्द हुनुका साथै आपूर्ति शृंखलामा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ ।
विश्व बैंकले यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र ४५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । युक्रेनमा मुद्रास्फीतिदर १७ प्रतिशत पुगेको छ । युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले यो वर्ष युक्रेनको मुद्रास्फीतिदर २० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याइएको बेन्चमार्क ब्याजदरले जनताको बचतलाई बढ्दो मुद्रास्फीतिबाट बचाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ । यसका साथै यो कदमले अर्थतन्त्रको दबाब कम गर्नुका साथै मुद्रालाई स्थिर राख्ने बैंकले जनाएको छ ।
रुसको आक्रमणपछि युक्रेनको मुद्रा रिभनिया ठूलो दबाबमा पर्नुका साथै मूल्यमा समेत भारी गिरावट आएको छ । युद्ध सुरुभएपश्चात युक्रेनले पहिलोपटक ब्याजदर वृद्धि गरेको हो । यससँगै बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएपछि ब्याजदर पुनः घटाउने संकेत गरेको छ। रुसीे आक्रमणबाट युक्रेनको १०० बिलियन डलरबराबरको पुर्वाधारमा क्षति पुगेको छ ।
सैनिक रक्षालाई सुदृढ गर्न र युद्धका कारण जीविकोपार्जन गुमाएकाहरुलाई सहायता प्रदान गर्न युक्रेन सरकारले खर्च वृद्धिलाई तीव्र पारेको छ । जसका कारण मे महिनामा युक्रेनले बजेट घाटा २७ प्रतिशतले बढ्दै ७.७ बिलियन डलर पुगेको छ । यस्तै रुसद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा प्रवाह गरिएको ऋण नउठ्ने तथ्य स्वीकार गर्न युक्रेनी बैंकहरु बाध्य छन् ।